ညှပ် PA ဆိုပြီး-1500.1 Anchoring insulator တွင်လည်းကြားနေတမန်နှင့်အတူ LV-ABC ရုပ်သံလိုင်းများကျောက်ချရပ်နားဖို့ဒီဇိုင်း, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-adjustments ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီထုတ်ကုန်ရှင်းလင်းသောကြားနေတမန်နှင့်အတူ LV-ABC ရုပ်သံလိုင်းများအဘို့သင့်လျော်သည်, ပြင်ဆင်ပြီးသုံးပြင်တိုးမြှင့်ဖို့ carborundum နှင့်အတူ coated နိုင်ပါသည်။
The clamp consists of die casted aluminum alloy body and self-adjusting plastic wedges which clamp the neutral messenger. Clamp body made of corrosion resistant die casted aluminium alloy, bail of stainless steel, wedges of weather and UV resistant reinforced plastic. The stainless steel bail allows installations of clamps onabracket. LV ABC tension clamps and LV ABC bracketsစည်းဝေးပွဲကိုအဖြစ်လည်းကောင်းသီးခြားစီသို့မဟုတ်အတူတကွရရှိနိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်းများ: ချေးခံနိုင်ရည် casted လူမီနီယံအလွိုင်း, သံမဏိအာမခံ, ပလပ်စတစ်အားဖြည့်ဖိုက်ဘာမှန်သေဆုံးလျက်ရှိသည်။
analog: DR-1600, РА54-1500С, PA-1500 * 20
ပုံစံ MBL, KN Cable ကိုအရွယ်အစား, မီလီမီတာ အလေးချိန်, ကီလိုဂရမ်
PA ဆိုပြီး-1500.1 15 11 - 14 0,382
ယခင်: Overhead Wedge Type Tension Clamp PA-1000
နောက်တစ်ခု: LV ABC Cable Tension Clamp PA-1500
နိမ့်ဗို့အား Credit: ABC လျောက်ပတ်